အသက် ၇၆ နှစ်အရွယ် အဖိုးအိုတစ်ဦးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အပြန်အလှန်စကားများတိုက်ခိုက်
ပို့စ်တင်ချိန် - 6/02/2014 10:42:00 AM
ဗွီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ဖို့connection မကောင်းသူတွေအတွက် ဘာတွေ ပြောသွားသလဲဆိုတာ
ကို သိရအောင် ပြန်ရေးပေးလိုက်တာပါ။
မနေ့ ည ၁. ၆. ၂၀၁၄ လယ်ဝေး၊ပျဉ်းမနား၊
တပ်ကုန်း ၃ မြို့ နယ်ပေါင်းပြီးပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက် ဒေါ်စုဟောပြောစည်းရုံးပွဲလုပ်ပါတယ်။
ဟောပြောပွဲကအပြန် တပ်ကုန်းမြို့အထွက်နားမှာ ၄၃၆ မပြင်ဆင်ဖို့ ဆန္ဒပြ တဲ့ လူတစ်စုနဲ့ တွေ့ပါတယ်... ဒေါ်စုကလာခဲ့ပါဆိုပြီး ဘာကြောင့် မပြင်ချင်တာလဲ။
ဆန္ဒပြတာလဲ ဆိုတာကို ခေါ်မေးတော့ အသက် ၇၆ နှစ် အရွယ် အဘိုးကြီးတစ်ယောက် ဆိုင်ဘုတ်
ကိုင်ပြီး ဒေါ်စု ကားနာကို လာပါတယ်၊ အဘိုးအိုနဲ့ ဒေါ်စု အပြန်အလှန်ပြောဆိုချက်တွေကတော့။
လာလာလာ လှမ်းခေါ်လိုက်ပါ၊ ဘာဖြစ်လို့ မပြင်ဆင်ချင်တာလဲ။
ဥပဒေနဲ့ အညီ ပြင်လို့ ရရက်သားနဲ့ ဘာလို့ လမ်းပေါ်ကို လူထုတ်တာတုန်း၊
လမ်းပေါ်ကို လူတွေ မထုတ်ပါဘူး.။
အခုလူတွေရောက်လာတာ၊ နင်ထုတ်လို့ ငါတို့ ရောက်လာရတာ၊ ဥပဒေနဲ့အညီလုပ်ပါ၊
၄၃၃ကို ကျေလည်အောင်ဖတ်၊ က ၊ခ ခွေး မကျန်အောင်ဖတ်၊
ဥပဒေနဲ့ ညီအောင်လုပ်တယ်၊ ဒီဟာတွေ အားလုံးလုပ်တာ ခွင့်ပြုချက်နဲ့လုပ်တာ၊ ဥပဒေနဲ့ အညီလုပ်တာ၊ ကျွန်မတို့လည်းဥပဒေ ဘောင်အတွင်းကလုပ်တယ်၊
လာပိုင်ခွင့်ရှိရင် ရိုးရိုးသားသားလာပါ၊ကောင်းတဲ့ဟာနဲ့ လုပ်ပေးပါ၊ ဒေါ်စုကြည်အနေနဲ့ ကောင်းတာလုပ်ပြတာလေးကို ကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်၊ ခင်ဗျာ ပြည်သူတွေကို ဒုက္ခ မပေးပါတော့ နဲ့၊ ၈၈ မှာကျွန်တော်တို့ ခံခဲ့ရပြီးပြီ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ကျွန်တော့်အဖေကို သတ်ခဲ့လို့ ကျွန်တော်ခံခဲ့ရပြီးပြီ၊သူဖက်ဆစ်ဂျပန်ကိုခေါ်လာလို့၊ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကြောင့် ကျွန်တော့် အဖေသေခဲ့ရတယ်၊
ဟုတ်ပြီ အဲဒါကို record လုပ်ထားပါ
လုပ်ထားပါ၊ဒါဟာတင်ပြတာပါ၊ တစ်ပြည်လုံးကိုသိစေချင်တယ်၊ တစ်ယောက်တည်းဘဲ
အဲတော့ ဟုတ်ပြီ၊တပ်မတော်ကိုဘယ်သူက ဘယ်တုန်းက စပြီးတည်ထောင်ခဲ့တာလဲ၊
တပ်မတော်ကို အားလုံကတည်ထောင်ခဲ့တာ ၊တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး၊ရဲဘော်သုံးကျိတ်ကနေတည်ထောင်ထားတာ၊
ရဲဘော်သုံးကျိတ်ကို ဦးဆောင်တာဘယ်သူလဲဆိုတော့ အုပ်စုလိုက်ကြည့်ရင် သခင်ကိုယ် တော်မှိုင်းကြီးရှိတယ်၊ သခင်ဘစိန်ဦးဆောင်တာရှိတယ်၊
ရှင့်အဖေကို ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကသတ်တယ်ဆိုတော့ ကျန်တဲ့ရဲဘော်သုံးကျိတ်ကရောတာဝန်
ဒါဆို ကျန်တဲ့ တပ်မတော်လည်း တာဝန်ရှိတယ်ပေါ့
တပ်မတော်မှာတာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူး၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမှာတာဝန်ရှိတာ၊ သူခေါ်လာလို့၊ ဖက်ဆစ်ဂျပန်ကို သူခေါ်လာတာ၊ အခုခင်ဗျားလည်း ပြည်သူတွေကို ဒုက္ခရောက်
တပ်မတော်နဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုတော့ ဖေဖေကလွဲလို့  ကျန်တဲ့သူတွေက တပ်မတော်နဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ ပြောတာနော်၊ တပ်မတော်ကို ဖေဖေတစ်ယောက်တည်း ထူထောင်ခဲ့တာ၊အဲတော့ ကျန်တဲ့သူတွေက တပ်မတော်နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး၊ အဲတော့ အခုကျန်တာတွေကို တပ်မတော်က
ဟင်းဟင်း ယူရမယ်လေ၊တည်ငြိမ်မှုမရှိတာကို တည်ငြိမ်အောင် တပ်မတော်က တာဝန်ယူရမယ်၊ယနေ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုကြည့်၊ ထိုင်းနိုင်ငံကို မြင်ရဲ့လား၊
ပြည်သူတွေကနေပေးထားတဲ့ဟာကို အခု ဘယ်သူရှိသေးတုန်း၊ အခုတပ်က အာဏာထိန်းထားရပြီလေ၊ အဲဒါဘာဖြစ်လို့လဲသိလား၊
အဲဒါ တိုင်းပြည်မငြိမ်လို့၊အဲတော့ ခင်ဗျားတိုင်းပြည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပါ၊
တိုင်းပြည်ငြိမ်အောင် ဘယ်သူက လုပ်ဖို့တာဝန်ရှိတာလဲ
ခင်ဗျားမှာတာဝန်ရှိတယ်၊ ခင်ဗျားက တိုင်းပြည်ပျက်အောင်လုပ်နေတာလေ၊
အော် ကျွန်မက အစိုးရလား
အစိုးရက တိုင်းပြည်ပျက်အောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလေ၊ ဟုတ်ပြီး ဒါဆို
သခင်သန်းထွန်းက အစိုးရလား၊တိုင်းပြည်ဖျက်ခဲ့တာ၊ သခင်သန်းထွန်း၊ ခင်ဗျားဦးလေးလေ၊
အဲ ...သူတိုင်းပြည်ဖျက်ခဲ့တာ၊( နောက်ကလူတွေအဘိုးအိုကိုဆွဲသည်) ၊ မဆွဲပါနဲ့ကွ
မင်းတို့ က စကားပြောနေတာကို၊
ပြောလေ ၊ ဒါဆို အစိုးရကတော့ တာဝန်မရှိဘူးပေါ့၊
အဲ... သူပုန်ကဖျက်ခဲ့တာလေ၊ သခင်သန်းထွန်း၊ အဲဒါ ခင်ဗျားဦးလေးဘဲ အဲဒါ၊ကွန်မြူ နစ်က ခင်ဗျားဦးလေးဘဲ၊
အစိုရမှာရော၊ပြည်သူအားလုံးမှာရော၊ ခင်ဗျားမှာရော၊ ဒါနိုင်ငံသားအားလုံးမှာတာဝန်ရှိ တယ်၊
တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အောင်လို့ အစိုးရမှာတာဝန်မရှိဘူးပေါ့၊ အစိုးရမှာသာ တာဝန်ရှိတယ်။
ခင်ဗျားကလိုက်နာတယ်သာ ပြောတာ အခုပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေကြတယ်၊ ကျွန်တော်ဆို အသက် ၇၆ နှစ်ရှိမှ မတ်တပ်ရပ်စကား ပြောနေရပြီ၊ ခင်ဗျားဇိမ်နဲ့ ထိုင်နေတာ၊ကျုပ်က မတ်တပ်ရပ်စကားပြောနေတာ၊ ခင်ဗျား အသက် ကျုပ်ထက် အများကြီးငယ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မကဒေါ်တော့ မလာချင်လဲနေလို့ရပါတယ်၊ ဟိုမှာရပ်နေလဲရတာဘဲ၊
ပြောချင်တာကို ပြောလို့ရပါတယ်၊ အဲတော့အစိုးရမှာလဲတာဝန်ရှိတယ်၊
အဲဒီတော့ ၂၀၀၈ ကို ပြင်မယ်၊ ဟောဒီမှာ ဒါကိုပြင်ဖို့ကျုပ်က လက်မခံနိုင်ဘူး ၊ ဟောဒီမှာကြည့်၊ ဒါကို အပြင်မခံနိုင်တာ ( ဘုတ် ဘုတ်ဘုတ် ) ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးအားကန့်ကွက် သည့် ဟုရေးသားထားသော ဆိုင်ဘုတ် ကို ပုတ်ပြသည်။
ကျွန်မတို့ကပြင်မယ်၊ ကျွန်မတို့ကတော့ ပြင်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်လို့ပြင်မယ်၊ အဲတော့တိုင်းပြည်ကို ( --------) နောက်စလုံး ၇ လုံးခန့် မသဲကွဲတော့ပါ၊
ဥပဒေနဲ့ အညီပြင်ရင်လက်ခံမယ်၊ဥပဒေနဲ့မညီရင် လက်မခံဘူး၊
ဥပဒေနဲ့ညီအောင်လုပ်နေတယ်၊ ကျွန်မတို့လုပ်တာတွေအားလုံးဥပဒေနဲ့ညီတယ်၊မညီလို့ရှိရင် ကျွန်မတို့ကို ဥပဒေအရ အရေးယူလို့ရတယ်၊ဥပဒေနဲ့ညီလို့အရေးမယူတာ၊
ဥပဒေမညီရင် အရေးယူရမယ်ပြောတယ်၊ အဲ ခင်ဗျားက ဟိုကပ်ဒီကပ်မလုပ်နဲ့လေ၊
အို ဘာမှမကပ်ဖူး၊ကျွန်မတို့ ကပ်စရာအကြောင်းလဲမရှိဘူး၊ဥပဒေနဲ့ မညီရင် ဥပဒေ အရ အရေးယူလို့ရတယ်၊
ကျုပ်က ဘယ်ပါတီမှ လက်ခံတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးနော်၊ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးစိတ်နဲ့လုပ်နေတာ၊
ဥပဒေနဲ့ မညီရင် အရေးယူလို့ရတယ်၊ အဲတော့ ရဲစခန်းမှာသွားပြီးတော့တိုင်လို့ရတယ်၊ ဥပဒေနဲ့ မညီဘူး အရေးယူပါလို့၊
အခုကျွန်တော်တို့က သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ကိုယ်ဝိုင်း၊ ကိုယ်ခြံထဲမှာလုပ်တာ၊ အခု ခင်ဗျားက ဒီခေါ်လို့သာ ကျုပ်ရောက်လာတာ၊ ဥပဒေ ခင်ဗျားက စချိုးဖောက်တာနော်၊
ဒေါ်စု- ကျွန်မတို့ မချိုးဖောက်ဖူး၊
အဘိုးအို- အေး ခင်ဗျားက လမ်းပေါ်ကို ကျွန်တော်ကို့ ခေါ်ပြီ၊ခင်ဗျားကျွန်တော်ကို လမ်းပေါ်မခေါ်ပါနဲ့ဗျာ၊ ကျွန်တော်အခုလမ်းပေါ်ရောက်လာပါပြီ၊
ကျွန်မ အတင်းမခေါ်ဘူးလေ၊ ဘာဖြစ်လို့လားသလဲ၊
ဘယ်ဟုတ်မလဲ ၊ ခင်ဗျားလုပ်နေတာမဟုတ်လို့ လာတာလေဗျာ၊ ခင်ဗျားမဟုတ်တာလုပ်လို့ ၊ အခုကျွန်တော်နဲ့ ခင်ဗျား စကားပြောနေတာ ၊ ခင်ဗျားအရည်အချင်းကျုပ်သိသွားပြီ၊
သွားသွား ၊ခင်ဗျား အရည်အချင်းမရှိဘူး၊ အလကားပဲ၊
ကျွန်မကနေ လာချင်ရင်လာလို့ရတယ်ဆိုပြီးခေါ်တာ ၊အခုသဘောပေါက်ပြီနော်၊
သဘောပေါက်တယ်နော်၊ အရည်အချင်းမရှိတဲ့လူကဒီလိုစကားပြောတာ အရည်အချင်းရှိတဲ့လူက ဒီလိုစကားမပြောဘူး၊ ၄၃၃ ကို သေချာ ကျကျနနဖတ် ၊ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာ၊ စာတော့ကွာ ဥပဒေတောင်မတတ်ဘဲနဲ့ ပြင်ချင်ရာ လျောက်ပြင်လို့ရမလား၊ ဥပဒေနဲ့အညီပြင်ပါ၊
ကျွန်မတို့ ၄၃၃ ကို ပြင်ချင်တာလဲမဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒါသိတယ်၊ ၄၃၆ ကိုပြင်မှာ သိတယ်၊ အဲဒါကြောင့် ၄၃၃ ကို နားလည်အောင်လုပ်ခိုင်တာ၊ ၄၃၃ ကို မကိုင်ရင် ၄၃၆ ကို အရင် လာပြီး ကိုင်လို့မရဘူး၊
ခင်ဗျားတို့ ၅၉ (စ) လုပ်တယ်၊ လုပ်မရတော့ ၄၃၆ ကို လာလုပ်တယ်၊ ဥပဒေမတတ်ဘဲနဲ့ ဟိုလျောက် လုပ် ဒိလျောက်လုပ် လုပ်မနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့၊
ရဲစခန်းက ဥပဒေနဲ့ ဘာမှမပတ်သက်ဖူးနော်၊ ဥပဒေအရာရှိသာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တာ၊ ရဲစခန်းက အဲဒါ သူ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး၊
မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါ၊ သူပြောတယ် ရဲစခန်းက ဥပဒေနဲ့ ဘာမှ မသိဘူးပါဘူးလို့ သူပြောတယ်၊( ဘေကလူတွေကိုပြောသည်)
ဟန်အန့် ဟန့်အန် -- ရဲစခန်း သူတို့နဲ့ဘာမှ မဆိုင်ဘူး၊ ပုဒ်မတပ်တာ ရဲစခန်းကတပ်လို့မရဘူး၊ ခင်ဗျားသိလား အဲဒါရော၊ဘယ်အမှုကို တိုင်တိုင် ရဲစခန်းက ဘာမှ ပုဒ်မတပ်လို့မရဘူး၊
ဥပဒေနဲ့ ရဲ စခန်းနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူးဆိုတာ ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်ပါ (ဘေးကလူတွေကို ပြောသည်)
အေး မဆိုင်ဘူးလေ ၊ ဥပဒေ အရာရှိက ပုဒ်မ ချပေးမှ လုပ်လို့ရတယ်၊
ကျွန်မတို့သဘောပေါက်ပြီး၊ ရဲစခန်းက ဥပဒေနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာကို(--------) နောက် ၆ လုံးခန့် မသဲကွဲပါ ၊
အဘိုးအို- ဟင်းဟင်း သူနဲ့ မဆိုင် သူပုဒ်မတပ်လို့မရဘူးဗျာ၊ ကဲ တပ်လို့ရလား၊ (ဒေါ်စုကိုလက်ညှိုးထိုး၍ ပြောသည်)
ပုဒ်မ တပ်ထား မတပ်တား နောက် (-----------) ၈လုံးခန့်မသဲကွဲပါ၊
ဘာအမှုတိုင်တိုင် ရဲက ပုဒ်မတပ်လို့ရလား၊
မဆိုင်ဘူးလေ၊ သူကစစ်ဆေးရေးတာဝန် ၊ ဥပဒေပုဒ်မတပ်လို့မရဘူး၊ ဥပဒေအရာရှိကို တင်ရတယ်၊
အဘိုးအိုအား ကင်မရာများဖြင့်ရိုက်သည် ၊ ရိုက် အဲဒီမှာ ( အဘိုအိုမှ ဓာတ်ပုံရိုက်သူများကို ပြောသံ)
Video From Ye Moe facebook